Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalo Xuduuda Ogadenia & Oromia Kudhex Maray Labada Hawaarin Iyo Dabaqoodhi Baxsaday.
Dagaalo Xuduuda Ogadenia & Oromia Kudhex Maray Labada Hawaarin Iyo Dabaqoodhi Baxsaday.
Posted by Dulmane	/ March 31, 2017
Wararka naga soo gaadhaya xuduuda Ogadenia iyo Oromia ayaa sheegaya in ay dib uqarxeen dagaaladii udhaxeeyay labada hawaarin ee labada wadan uu gumaysigu kasameeyay waxaana lasheegayaa in dagaaladan ay saamayn kuyeesheen deegaano badan oo xuduuda ku teedsan.
Warkan oo aan kahelay xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa sheegaya in dagaaladan ay galaaftee nolosha dad badan oo isugu jira Hawaarinta dagaalamaysa iyo dadka shacabka ah ee deegaanadaas kudhaqan waxayna dagaaladii ugu dambeeyay udhaceen sidan.
Waxaa markay taariikhdu ahayd 25/3/17 deegaanka Ruqaamadhu oo Dagmada Lagahida ee Gobolka Nogob katirsan dagaal culus oo labada dabaqoodhi ku dhex maray waxaa labadoodaba kasoo gaadhay khasaare aad ubadan oo naf iyo maalba leh. Sidoo kale Muja oo Dagmada Muluqaamayu katirsan dagaal culus oo kadhacay waxaa labada hawaarin kaga bakhtiyay ciidan aad ubadan oo kamid ah kuwa uu gumaysigu marin habaabiyay.
Waxaa kale oo warkan uu intaas ku darayaa in markay taariikhdu ahayd 26/3/2017 deegaanka lagu magacaabo Dambaswayne oo Degmada Jinicsani katirsan dagaal labada dabaqoodhi ku dhexmaray waxay isku soo gaadhsiiyeen khasaare lixaad leh.
Dhinaca kale waxaa todobaadkan meelo badan oo Ogadenia katirsan ka baxsaday qaar katirsan ciidanka Hawaarinta looyaqaano ee wayaanuhu uu kadhisay Ogadenia, wararkii ugu dambeeyay ee arintaas la xidhiidha ayaa sheegaya in deegaanada Galaalshe iyo Baka ay dabaqoodhigii ugu dambeeyay kabaxsadeen.
25/3/17 Galaalshe waxaa ka goostay 3 hawaarin ah oo sida lasheegay hubkoodii sita. Isla taariikhdan 25/3/17 Baka oo Dagmada Dhagaxbuur katirsan waxaa ka goostay 7 Hawaarin ah wuxuuna warku intaas kudarayaa in qaab xoog ah ay halkaas kaga baxsadeen.
Sikastaba ha ahaatee baxsadka Hawaarinta ayaa baryahan aad usoo badanayay waxaana arintaas loo aaneeyay mushaar iyo raashin la’aan mudo sanad ahba haysata iyo bahdil dhinaca wayaanaha kaga imaanaya.